ITOOBIYA OO KU GUULEYSATAY MURUQTUUJINTA AMA HAYMANADA (HEGEMONY) GEESKA AFRIKA – Shabakadda Amiirnuur
June 25, 2020 4:59 am by admin Views: 66
Waxa muuqata oo bannaanka timi awood siyaasadeed ama caskariyeed oo ay Itoobiya muddaba ku taamaysay, taas oo ahayd in ay hesho muruqtuujinta ama haymanada Geeska Afrika, balse dawladihii Soomaaliya soo maray sannadihii 1960-1990kii ay ahaayeen kuwa hor taagan. Inkasta oo wixii ka dambeeyey burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ciidammaduna hoggaanka u hayeen, haddana dawladihii liitay xagga awoodda iyo siyaasaddaba ee Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyey sannadkii 1991kii, oo middan hadda joogta la mid ah ayaan wax qiraal ah laga helin amase aan muujin qirashada muruqtuujintan (hegemony), inkasta oo ay qudhooda awood siyaasadeed iyo mid ciidanba ay Itoobiya ku lahayd.
Qoladan hadda joogta ayaa u muuqata in ay qiraal ahaan u aqoonsadeen muruqtuujintaas ka dib markii ay golayaal badan ka fuliyeen ama taageero ka muujiyeen danaha ay Itoobiya ka leedahay qaaradda.
Dhawaan ayey ahayd markii Soomaaliya iyo Jabuutiba ay ka cagajiideen in ay garabka siiyaan Masar, oo loollan siyaasadeed iyo mid ciidanba kula jirta dawladda Itoobiya salkana ku haya biyaxirka rajada weyn ee Itoobiya (Grand Eithiopian Renaissance Dam), kaas oo la filayo in uu hawlgalo bartamaha bisha nagu soo fool leh ee Luulyo. Haddaba qolada Villa Somalia iyo Jabuutiba waxa ay oggolaadeen ama qireen arrin aan Soomaalidu lixdan sano iyo ka badan aysan qirsanayn, taas oo ah muruqtuujintaas.
Soomaaliya iyo Jabuutiba waxa ay ka mid yihiin urur ku sheegga Jaamacadda Carabta (Arab League), oo awalba lagu kala qaybinayey dadka Muslimiinta ah marka qowmiyado iyo qarammo xadad aan jirin loo sameeyey, ka dib dumistii dawladdii Islaamiga ahayd ee Cismaaniyada 150 sano ku dhawaad, ayaa hareer maray qawaaniintii ay ku heshiiyeen Jaamacada Carabtu, waayo waxa heshiisyada Ururkan ka mid ahaa in aan marnaba dal ka mid ah ururkan aan loo garba duubin dal kale.